Daawo Muuqaalka Ciidamada Amison iyo xarakada Al-shabaab oo xalay ku dagaalamay galbeedka magaalada Baldweyne ee xarun gobolka Hiiraan. |
Daawo Muuqaalka Ciidamada Amison iyo xarakada Al-shabaab oo xalay ku dagaalamay galbeedka magaalada Baldweyne ee xarun gobolka Hiiraan.
Dagaalo culus ayaa xalay saqdii dhexe ka dhacay galbeedka magaalada B/weyne ee gobolka Hiiraan kuwaasoo dhexmaray ciidamada Jabuuti ee magaca AMISOM ku jooga halkaas iyo xoogaga Al-shabaab.
Waxaa dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan rasaas kala nooc ah iyo madaafiic, iyadoo dadweynaha magaaladana ay sheegeen iney maqlayeen daryanka qaraxyo waaweyn oo cabsi iyo khal khal badan ku abuuray.
Wararku waxay sheegayaan in dagaalkaas uu bilowday ka dib markii xoogaga Al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada AMISOM ku lahaayeen dhinaca galbeed ee magaalada B/weyne, waxaana ka dhacay goobtaas dagaal culus oo socday muddo saacad ka badan.
Mid ka mid ah madaafiicdii la isku adeegsanayey dagaalkaas ayaa ku habsaday guri ay degan qoys shacab ah, waxaana ku dhaawacmay illaa saddex ruux oo shacab ah sida wararku ay sheegayaan iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha kale ee ka dhashay dagaalkaas oo lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaa ee ka dhaca magaalada B/weyne tan iyo markii ay halkaas tageen ciidamada Jabuuti.
Ma jiro war ku saabsan dagaalkan oo ka soo baxay saraakiisha Al-shabaab iyo kuwa AMISOM hase ahaatee gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amaanka ee gobolka Hiiraan Ing. Axmed Cismaan Cabdalla yaa sheegay in xoogagii Al-shabaab ee weerarka soo qaaday laga dilay 9 dagaalyahan qaar kalena laga dhaawacay, xaaladuna ay saaka tahay mid degan.
halkaan hoose ka daawo wabixintaani oo dhameystiran